ललितपुर प्रहरीको हिरासत कक्षमा झुन्डिएर आत्महत्या- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
ललितपुर — महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलको हिरासत कक्षमा सिरहाका एक जनाले बुधबार बिहान आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा कोटेश्वर बस्ने २४ वर्षीय दुर्गेश यादव छन् ।
प्रहरीले उनलाई असार १४ गते बालकुमारीस्थित मकैबारीमा राखेर १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको मुद्दामा सोही राति ग्वार्कोबाट पक्राउ परेका थिए । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) टेकप्रसाद राईका अनुसार यादवले आफू सुतेको तन्ना च्यातेर डोरी जस्तो बनाइ झ्यालमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको हुन् ।
घटना घट्दा परिसरको नवनिर्मित ब्यारेक भवन उद्घाटन कार्यक्रम चलिरहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीले आफ्नो मन्तव्य दिइरहेका थिए । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुलगायत उपस्थित थिए ।
प्रकाशित : असार १७, २०७७ १२:३९
बुटवल — प्रदेश ५ को बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि पीसीआर प्रविधिबाट स्वाब परीक्षण सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको ६० लाख रुपैयाँबाट मेसिन खरिद गरिएको हो ।
मेसिन राख्न पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको व्यवस्थापन भने अस्पताल आफैले गरेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालको संयोजकत्वमा १२ जना प्राविधिक प्रयोगशालामा खटिएका छन् । उनीहरूलाई अस्पतालबाटै सेवासुविधा दिइनेछ । ‘सुरुमा दुई चरणमा चलाउँछौं, दैनिक एक सय नमुना परीक्षण गर्नेछौं,’ डा. खनालले भने, ‘माग र आवश्यकता बढ्दै गए थप प्राविधिक व्यवस्थापन गरेर २४ सै घण्टा सेवा दिनेछौं ।’
पीसीआर मेसिनको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मंगलबार उद्घाटन गरे । यसअघि प्रदेशमा रूपन्देही र बाँकेमा एक/एक र दाङमा दुई गरी चारवटा मेसिनबाट परीक्षण हुँदै आएको थियो । जसबाट दैनिक चार सय स्वाबका नमुना परीक्षण हुने गरेको थियो । बुधबारदेखि दैनिक ५ सय नमुना परीक्षण हुने सामाजिक विकासमन्त्री बरालले बताए । प्रदेश सरकारले भैरहवामा रहेको प्रदेश प्रयोगशालामा पनि थप एउटा पीसीआर मेसिन व्यवस्थापन गरेको छ । यूएनडीपीले दिएको उक्त मेसिन परीक्षणका क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : असार १७, २०७७ १२:२२